Isikolo-Jiangsu Senwei Electronics Co, Ltd.
Inkqubo yoLawulo lwaMandla eDyunivesithi yase-Yunivesithi
Inkqubo yekhadi elinye nekhadi lokuzenzela
Inkqubo yolawulo lwamandla obukrelekrele ibandakanya i-terminal metering, ingqokelela yedatha kunye nesoftware yePC. Isixhobo somgangatho wombane yimitha yombane esemgangathweni okanye imitha yamandla emodyuli enombonakalo we-RS485. Isixhobo sokuqokelela idatha sinoxanduva lokuqokelela idatha yemitha yombane. Isixhobo ngasinye sokuqokelela sinokuthwala iimitha zombane eziyi-128. Isixhobo sokuqokelelwa kwedatha sine-RS485, TCP / indawo yomnatha oqhelekileyo womnatha. Isoftware yenkqubo yePC isetyenziselwa ukuqokelela idatha kunye nohlalutyo lweenkcukacha.
Kukho iindlela ngeendlela zokubonelela ngombane ngombane: iimitha zamandla ombane ezinomjelo we-RS485, ngomboniso we-Crystal yolwelo, iimitha ezijikelezayo ezimbini ezihambelanayo, kunye neemitha ezi-2 zesekethe. Imitha yombane esemgangathweni yamandla anemowudi yecrystal ebonakalayo ingabonisa ukusetyenziswa kombane ngokupheleleyo, amandla asetyenzisiweyo kunye namandla asele, esetyenziselwa ufakelo olusasaziweyo; Imitha esetyenzisiweyo isetyenziselwa imowudi enkulu yokufakelwa kobukhulu obukhulu, ishiye ikhitshi lokulinganisa eliphambili elihlanganisiweyo ukusilela kwento eyinkimbinkimbi yangaphakathi, amanqaku amaninzi okusilela kunye nolondolozo olunzima.
Imitha iza ne-CPU, ethi yenze ngokuzimeleyo yonke imisebenzi yolawulo lwamandla. Kulula ukuyifaka kwaye kulula ukuyigcina. Sisizukulwana esitsha sezixhobo zokulawula umbane ezilungiselelwe abafundi ezithatha indawo yekhabhathi yolawulo esembindini.
Ukongeza ekufezekiseni ulawulo lwayo kunye nemisebenzi yokulawula, inkqubo yombane elawula ubukrelekrele inokunxibelelana ngokungenamthungo kunye nenkqubo yamakhadi ekhampasi ngenkqubo yokufikelela ekuhlawuleni ngenkonzo yokuhlawula abafundi, ukujonga okwenyani kwiziko lekhadi, ukufezekisa engalondolozwanga kunye nokusebenza ngokukhuselekileyo nangokuzinzileyo kwenkqubo yokulawulwa kombane. Le nkqubo ikakhulu yeyokuqokelela okumbindi kunye nokusetyenziswa kombane wombane ezikolweni nakumashishini. Indlela yokunxibelelana ye-RS485 isetyenziswa ngaphakathi kwesakhiwo, kwaye i-TCP / IP isetyenziselwa umjelo wonxibelelwano okude phakathi kwezakhiwo.
(1) Ukuseta komsebenzisi kunye nolawulo lwezixhobo
-Izixhobo zeRoom (inombolo yegumbi kunye nolwazi lwendawo enje ngomgangatho nesakhiwo, inani labahlali kunye nolwazi oluhambelana nesazisi, uluhlu lwerhafu kunye nolwazi olukhethekileyo)
-Imetera yokuseta isigama (imbalelwano phakathi kwenombolo yemitha yangoku kunye neshedyuli yenombolo yegumbi, kunye nolwazi lomsebenzisi)
-Isethingi yesango leData (setha inombolo yesango kunye nolwazi lwegumbi kunye nemitha phantsi kolawulo lwayo, indawo esangweni kunye negama, njl.njl.)
(2) Umbane wombane kunye nolawulo lweentlawulo
-Isetyenziselwa umlinganiso ongeniswe ngaphandle we-chip (ubungakanani bokulinganisa (inqanaba le-1,0), kunye neeparamitha zokusebenzisa amandla ezahlukeneyo ngexesha elinye)
—— Umbane ohlawulelweyo kwangaphambili, ukuvalwa okungabizi mali (iimemori zesikhumbuzo zokuphelelwa kombane, umda ongaphezulu unokusekwa ngesoftware)
-Isikhumbuzo esikusasazeko kwangoko (iSMS eshukumayo, isikhumbuzi somboniso we-LED, umbuzo wekhampasi yeWEB)
-Iirekhodi ezinkulu, ukushicilelwa kwamatyala, (iirisithi zedipozithi eprintiweyo xa ubeka)
-Ingxelo yokubeka iliso kwisitokhwe (idiphozithi yeakhawunti kunye nengxelo yebhalansi, iinkcukacha zedipozithi yecashier)
-Intlawulo-yokuhlawulwa kwenkonzo (ukufezekisa uqhagamshelo olungenamthungo kunye nenkqubo yekhadi elinye lokuzihlawulela ngenkonzo kunye nokuthengwa kombane)
(3) Uqwalaselo lweParamitha kunye noLawulo loMthwalo
-I-software inokwenza iisetingi ezahlukeneyo zepharamitha njengamandla ocima / ukucima, umda womthwalo, njl. Njl. Kwaye uzise kwaye uzigcine kwindawo yokugcina imitha. Phantsi kokusebenza ngaphandle kwegridi, imitha inokuthi ngokuzenzekelayo yenze imisebenzi eyahlukeneyo yolawulo esekwe yisoftware
-Senza amandla-amandla kunye nokuphelisa amandla nangaliphi na ixesha
-Amandla omda wokupakisha unokusetyelwa ngokunqamlezileyo, kwaye iya kuthi icime ngokuzenzekelayo xa umda ugqithile
-Amandla omthwalo osetyenziswayo unokuseta ngokungxama, ukuthintela umlilo
-Avuma ukusetyenziswa ngokungekho mthethweni kweesokethi zombane ezinqanda umda ngokusebenzisa ubuchwephesha ukushenxisa ingozi ezinokubakho zokhuseleko
-Umsebenzi wokuphinda ufumaneke emva kokusilela kwamandla, ixesha lokubuyisela linokubekelwa kwimizuzu engama-0 ukuya kwengama-255, ku-0 lithetha ukungabikho kwakhona
(4) Ukujonga imeko kunye nolawulo lwedatha
-I-Equigtual hali yokubeka iliso (okwenyani yokujonga imeko ye-intanethi kunye nemeko yempazamo yemitha, inqanaba elikwi-Intanethi nesimo esibi sesango, njl. Njl.)
-Imeko yokubeka esweni imeko (ukubeka esweni kwegumbi okwangoku, ivolthi, ukusetyenziswa kombane okukhuselekileyo, njl. Njl.)
-I -Status kunye neerekhodi (ukubeka esweni ixesha lokutshintsha kwesimo, amandla kwangoko, njl. Njl. Ukubeka esweni okusebenzayo)
-Ukufumana amandla kunye nokusetyenziswa kwamandla (kumbuzo kunye nombuzo we-WEB yenethiwekhi)
-Isixhobo sombane esisisiseko (ukuba siyadlula, ixabiso leyunithi liya kuhlawuliswa)
-I-Management yolawulo lwembuyiselo (abafundi baya kubuyiselwa imali kugqitywe ngexesha lokudluliselwa okanye lokuphumelela, kwaye ingxelo iya kwenziwa ngokuzenzekelayo)
-—Room ukutshintshiselana ngedatha yokuguqula (umzekelo, ukutshintshiselana ngegumbi, ukuguqulwa kwedatha ngokusebenzisa iisetingi zesoftware)
-Uhlalutyo lweenkcukacha zembali (qho ngenyanga, ngekota kunye nohlalutyo lwamanani osetyenziso lombane, ulwaphulo-mthetho, njl. Njl.)
-— Uluhlu lwamaxabiso oluluqilima lunokuseta (iintlawulo zeyunithi ezahlukeneyo zisetwa ngokobunini obahlukeneyo babasebenzisi begumbi)
(5) Ulawulo lwenkqubo kunye nokhuseleko lwedatha
-Isixhobo sokulawula ukungaphumeleli kwi-alamu (ilawula ikhompyuter ukubeka iliso kwimifanekiso ethile)
-Isixhobo esixilongayo sokuchonga isifo ngokukhawuleza (ilawula ikhompyuter ukubeka iliso kwimifanekiso ethile)
-Ukubeka esweni okwangoku
-Isekwe kwi-B / S yoyilo (inokusebenza, ilawulwe, icatshulwe, njlnjl. Nge-Intanethi)
-Indlela yokunxibelelana engenakuchazeka kunye nenkqubo yekhadi elinye (ukuqonda intlawulo kunye nentlawulo, ukuthengwa kwamandla enkonzo)
-— Ukhuseleko lweData ngexesha lenkqubo yamandla (kwimeko yokusilela kwamandla okanye ukusilela kwekhompyuter, imitha kunye nomqokeleli ngokuzenzekelayo igcina idatha ukuqinisekisa ukuba ayizukulahleka kangangeminyaka eli-10)
-Ukugcina idatha yogcino (ehambelana neendlela ezahlukeneyo zokugcina kunye neendlela zokuqinisekisa ukhuseleko lwedatha)
-I-Operator, iphasiwedi yomlawuli, ukuhlelwa kwegunya (amagama ahlukeneyo abasemagunyeni abohlukeneyo, amagama ahlukeneyo okusebenzisa ipassword, ekhuselekileyo neyimfihlo, nolawulo olucwangcisiweyo
(1) Ukulinganiswa kwamandla okusebenza kunye nokusebenza kwakhona.
(2) Amacandelo aphambili enza izinto ezikumgangatho ophezulu.
(3) Ukuboniswa kwe-LCD ngamehlo okubona okuphangaleleyo kwaye umahluko omkhulu unokubonisa: amandla ashiyekileyo, ukusetyenziswa kwamandla okugcwele, amandla athengiweyo. Kulungele ukuba abafundi bajonge ukusetyenziswa kwamandla
(4) Ngemisebenzi yokulinganisa yevolthi, yangoku, amandla, amandla ombane njalo-njalo.
(5) Imitha ngokwayo inomsebenzi wokugcina idatha. Xa unxibelelana nekhompyuter yolawulo, ngokukhawuleza ilayisha idatha yokuqokelela amandla; Ixhasa iprotocol yonxibelelwano ye-RS-485.
(6) Ngomsebenzi wekhalenda kunye newashi, ngaphakathi kweeyure ezi-8, unokucwangcisa amaxesha ama-8 ukulawula amandla ukucima
(7) Imitha yombane inokusebenza ngokuzimeleyo kwaye inomsebenzi wokuchonga umthwalo onobungozi kwaye ibonelele ngesiqinisekiso esithembakeleyo sokuthintela ubungozi bokhuseleko
(8) Adopt DIN Ukufakwa kwesitimela, kuncinci kwaye kulula ukuyifaka.
Ukucaciswa okwangoku 5（20）、10（40）A
Ukutya umbane Umgca weVoltage: <= 1.5W, 10VA; umgca wangoku: <2VA
Uluhlu lobushushu -25 ~ 60degree
Imitha rhoqo (imp / kWh) 3200
Uluhlu lokufuma ≤85%
Imitha ye-Elektroniki ye-Elektroniki
Iindlela zoNxibelelwano zoMbane